दोस्रो घण्टामा नेप्से स्थिर, ६१ करोडभन्दा बढीको कारोबार (१ बजेको अपडेट)
असोज २८, काठमाडौं । बुधवार दोस्रो घण्टाको कारोबार अवधिसम्म नेप्से परिसूचक स्थिर रहेको छ । यो अवधिसम्म शून्य दशमलव ४९ अंकले घटेर परिसूचक १ हजार ५६८ दशमलव १० विन्दुमा कायम भएको हो ।
उता, सेन्सेटिभ इन्डेक्स भने शून्य दशमलव शून्य ६ अंक बढेर ३११ दशमलव ४७ विन्दुमा पुगेको छ । दोस्रो घण्टामा १९१ ओटा कम्पनीकोे ११ हजार ४३६ पटकको व्यापारमा रू. ६१ करोड ८२ लाख ४८ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । उक्त अवधिसम्म २३ लाख ३६ हजार २३४ कित्ता शेयर कारोबार भएको हो ।
बुधवार सर्वाधिक रकमको कारोबार भैरहेको सानिमा बैंकको दोस्रो घण्टामा रू. ४ करोड ९४ लाख १६ हजार बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको छ ।
दोस्रो घण्टामा बैंकिङको शून्य दशमलव शून्य १ प्रतिशत, व्यापारिकको शून्य दशमलव १४ प्रतिशत, होटलको शून्य दशमलव ४१ प्रतिशत, जलविद्युतको शून्य दशमलव १५ प्रतिशत र निर्जीवन बीमा समुहको शून्य दशमलव शून्य ४ प्रतिशत परिसूचक बढेको छ भने बाँकी समुहको घटेको छ ।
उक्त अवधिसम्म विकास बैंकको शून्य दशमलव ३३ प्रतिशत, वित्तको शून्य दशमलव ४६ प्रतिशत, अन्यको शून्य दशमलव १५ प्रतिशत, लघुवित्तको शून्य दशमलव शून्य ६ प्रतिशत, जीवन बीमाको शून्य दशमलव शून्य ९ प्रतिशत र म्यचुुअल फण्डको शून्य दशमलव ९३ प्रतिशत परिसूचक घटेको छ । यो अवधिसम्म उत्पादन तथा प्रशोधन समुहको परिसूचक भने स्थिर रहेको छ ।